छोरीको प्रश्न : आमाको शव बोक्न तथा किरिया बस्न हामीले किन नपाउने ? | karnalikhabar.com
छोरीको प्रश्न : आमाको शव बोक्न तथा किरिया बस्न हामीले किन नपाउने ? – karnalikhabar.com
प्रकाशित मिति :2017-01-11 21:38:12 गोरखाः गोरखा सदरमुकामबाट १० किलोमिटर पूर्वतर्फ बुङ्कोट गाविसको केन्द्र खाब्दी भञ्ज्याङ आउँछ । त्यहाँको बजारबाट सहिदस्मृति उच्च मावि जाने चाँपे गाउँमा १६ वर्षीया मेलिना र १४ वर्षीया इन्दिरा श्रेष्ठको घर पर्छ । विगत सात दिनदेखि यी दुई बहिनी आमाको काजकिरियामा गर्दै छन् ।